बोल सांसद बोल, भ्रष्टाचारको जालो खोल..! (फोटो र भिडियो सहित )::mirmireonline.com
बोल सांसद बोल, भ्रष्टाचारको जालो खोल..! (फोटो र भिडियो सहित )
काठमाण्डौं कार्तिक १४ । चारै तिर देउसी भैलोको रौनक छ । नाच्ने गाउने कुरा घरै पिच्छे चलिरहेकै छ चोक चोकमा पनि संगीतको रंग छदैछ । तर यो एउटा त्यस्तो देउसी खेलिदै छ , जहा नाङलोमा दान र दक्षिणाको अपेक्षा गरिएको हुदैन । तर यसले समाजमा देखिएका विकृति खासगरी राजनीतिमा देखिएको कुसंस्कार र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा यो देउसी केन्द्रीत छ । युवाहरु भन्छन् बोल बोल सांसद, भ्रष्टाचारको जालो खोल । यस्तो नारा सहित उनीहरुको नेताहरुको घरमा पुगिरहेका छन् ।
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालका कारण गठन भएको युवाहरुको साझा अभियान विवेकशील नेपालीले प्रधानमन्त्री, सभामुखको सरकारी निवास सहित नेताहरुको घरमा ब्यङग्यात्मक एवं खबरदारी देउसी भैलो खेलेको छ । आईतबार बिहान ९ बजेतिर प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास वालुवाटार छेउमा सडकमा विवेकशील नेपाली दलको नाममा खेलिएको देउसीमा १५÷२० जना युवाहरु नेपाली झण्डा बोकेर देउसी खेलिरहेका थिए ।
विवेकशील नेपालीका एक सक्रिय कार्यकर्ता बिष्णु प्रसाद दाहालले यो भ्रष्टाचार उन्मुलन र सुसस्कृति निमार्णका लागि देउसी खेलीएको बताए । वालुवाटारमा प्रधानमन्त्री र सभामुखको सरकारी निवासको बीचमा देउसी खेल्दा बोल सासद बोल , भ्रष्टाचारको जालो खोल जस्ता नारा लगाएका थिए । त्यो देउसी कुनै दान दक्षिणाको आशाबाट गरिएको नभई राम्रो अभियानका लागि युवाहरुले पहलको रुपमा शुरु गरेका हुन् । सोही समुहले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काग्रेसका युवा नेता गगन थापाको घरमा पनि देउसी खेल्ने बताएका छन् ।
के तपाई आफ्ना नानीहरुलाई मोबाइल प्रयोग गर्न दिनुहुन्छ ? सावधान ! यस्तो खतरा हुनसक्छ
प्रदेश मन्त्रालय, चुरे संरक्षणको केन्द्रीय कार्यालय र प्रहरीको हेडक्वाटर चितवनमा राख्ने सहमति !
महानगरमा अब स्मार्ट पार्किङ निर्माणको ब्यावस्था, पहिलो चरणमा न्यूरोडमा निर्माण गरिने
भुकम्प गएको आज तीन वर्ष पुरा: अझै टेकोकै भरमा पुरातात्विक सम्पदा, भूकम्पले ढालेका सम्पदा उठाउन किन ढिलाई ?
प्रचण्ड भन्छन्, पार्टी एकतापछि पछुताउनुभन्दा अगाडि नै समय लिनु राम्रो
मुलुकमा तानाशाहीको लक्षण अझै देखिन्छ: ओली
काठमाडौं, वैशाख १२ । गोरखा भूकम्प गएको आज ३ वर्ष पूरा भएको छ । २०७२